54 “Khamuluka ngenjabulo, wena wesifazane oyinyumba ongazalanga!+ Yenama ngokukhamuluka kwenjabulo futhi umpongoloze,+ wena ongazange ube nezinhlungu zokubeletha,+ ngoba abantwana bowesifazane olahliwe baningi kunabantwana bonomyeni,”+ kusho uJehova. 2 “Yenza indawo yetende lakho ibe banzi.+ Mabelule izindwangu zetende zetabernakele lakho elikhulu. Ungagodli. Yelula izintambo zetende lakho, uzenze ziqine lezo zikhonkwane zakho zetende.+ 3 Ngoba uyosabalala ngakwesokunene nangakwesobunxele,+ futhi inzalo yakho iyodla ngisho nefa lezizwe,+ futhi iyohlala ngisho nasemizini eyenziwe incithakalo.+ 4 Ungesabi,+ ngoba ngeke wenziwe ube namahloni;+ ungazizwa ululazekile, ngoba ngeke udumazeke.+ Ngoba uyolikhohlwa ngisho nehlazo lesikhathi sobusha bakho,+ nesihlamba sobufelokazi bakho obuqhubekayo ngeke usasikhumbula.” 5 “Ngoba uMenzi wakho Omkhulu+ ungumyeni wakho,+ nguJehova wamabutho igama lakhe;+ futhi uMhlengi wakho ungoNgcwele ka-Israyeli.+ Uyobizwa ngokuthi uNkulunkulu wawo wonke umhlaba.+ 6 Ngoba uJehova wakubiza njengokungathi ubungumfazi oshiywe ngokuphelele futhi ozwiswe ubuhlungu emoyeni,+ nanjengomfazi wesikhathi sobusha+ wabe esaliwa,”+ kusho uNkulunkulu wakho. 7 “Ngakushiya ngokuphelele umzuzwana,+ kodwa ngizokuqoqela ndawonye ngesihe esikhulu.+ 8 Ngesikhukhula sentukuthelo ngafihla ubuso bami kuwe umzuzwana,+ kodwa ngomusa wothando ngizoba nesihe phezu kwakho kuze kube nini nanini,”+ kusho uMhlengi wakho,+ uJehova. 9 “Lokhu kunjengasezinsukwini zikaNowa kimi.+ Njengoba nje ngifungile ukuthi amanzi kaNowa ngeke aphinde adlule emhlabeni,+ kanjalo ngifungile ukuthi ngeke ngikuthukuthelele noma ngikusole.+ 10 Ngoba izintaba zingasuswa, namagquma angayendayenda,+ kodwa umusa wami wothando ngeke ususwe kuwe,+ nesivumelwano sami sokuthula ngeke siyendayende,”+ kusho uJehova, Lowo onesihe kuwe.+ 11 “O wena wesifazane ohlushwayo,+ ojikijelwa isiphepho,+ ongaduduzwa,+ bheka ngibeka amatshe akho ngodaka oluqinile,+ futhi ngiyobeka isisekelo sakho+ ngamasafire.+ 12 Ngiyokwenza imibhoshongo yakho ibe ngeyamarubi, namasango akho abe ngawamatshe akhazimula njengomlilo,+ nayo yonke imingcele yakho ibe ngeyamatshe ajabulisayo. 13 Bonke abantwana bakho+ bayoba ngabantu abafundiswé uJehova,+ nokuthula kwabantwana bakho kuyochichima.+ 14 Uyomiswa uqine ngokulunga.+ Uyoba kude nokucindezelwa+—akukho lutho oyolwesaba—uyoba kude nento esabisa kakhulu, ngoba ngeke isondele kuwe.+ 15 Uma kwenzeka kuba khona okuhlaselayo, kuyobe kungengomyalo wami.+ Noma ubani okuhlaselayo uyowa ngenxa yakho.”+ 16 “Bheka! Mina ngidalé ingcweti, efutha+ umlilo wamalahle+ ikhiphe isikhali njengomsebenzi wayo. Mina futhi, ngidalé umuntu ochithayo+ ukuba enze umsebenzi wokuphihliza. 17 Noma isiphi isikhali esiyokwakhiwa ngokumelene nawe ngeke siphumelele,+ nanoma yiluphi ulimi oluyokuvukela ekwahluleleni uyolulahla.+ Leli yifa lezinceku zikaJehova,+ futhi ukulunga kwazo kuvela kimi,” kusho uJehova.+